Kermesy ihany koa izay tafiditra anatin’ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny faha 59 taona nijoroan’ny foloalin-dahy malagasy. Tonga nanao fanadihadiana teny Betongolo tamin’ny tapany maraina teo, nandritra ny fanomanana ny Kermesin’ny folohalindahy ny mpanao gazety Ny filatsahana an’elon’aina, ny Tir eolienne ireo no isan’ny nahasarika tanora, ankizy hatramin’izay anatin’ny Kermesin’ny foloalindahy. Hiavaka ny amin’ity andininy ity, hisy hatramin’ny « Jeu de simulation » etin’ny tafika an’abakabaka, sy ireo karazan-dalao ahazoana loka maro be, toa ny gana matavy.
Hitondra zava-baovao mandritra ny kermesin’ny tafika ihany koa ry zareo avy ao amin’ny « Magic Land ». Hanome fahafam-po an’ireo mpitsidika amin’ireo tolotra izay manavahana ny « Magic Land » hatramin’izay. Ho averina amin’ity andian’ny kermessy ity ihany koa ny Podium, izay handraisan’ny Mpitsoka mozikan’ny tafika malagasy anjara, sy mpanao vakodrazana ary maro hafa. Mandritra ny Kermessy, afaka hitsidika sy haka sary amin’ireo fitaovan’ny tafika malagasy hanaovana Fampiratiana ireo mpitsidika.
Tsy voatery hitady alavitra ihany koa amin’ny sakafo. Hanao fianambidy goavana ny Manda Sea Food, izay tsy izovina amin’ny maro intsony. Hisokatra isan’andro manomboka rampitso amin’ny valo 10 ora ka hatramin’ny 8 ora alina ny kermesy, ny podiumn’ny Kermesy kosa ho atomboka amin’ny 5 ora ariva.